कहिलेसम्म चल्छ उधारो राजनीति ? | चितवन पोष्ट दैनिक
कहिलेसम्म चल्छ उधारो राजनीति ?
२०७१ चैत्र १५, आईतवार ०२:०३ गते
एच. के. श्रेष्ठ
उत्तरआधुनिक समाजमा हरेक कारोबार अचम्मसँग गज्जबले चल्छ । किचकन्ने चरित्र सर्वत्र पाइन्छ । बाह्य छाया देखिन्छ । वास्तविक शरीर थाहा पाउन असम्भव हुन्छ । छल गर्ने जाने त्यसको प्रधान विशेषता हो । त्यसो त, उधारो चलन हाबी छ । फलानो घर मालिक देखाइन्छ तर धितो बैंकमा रहेका कारण वास्तवमा घर बैंकको भइसकेको हुन्छ । फलानोको गज्जबको उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि चलेको छ भन्ने कुरा भ्रममात्र हुन्छ, किनकि सबै बैंकको भइसकेको हुँदोरहेछ । कुनै पनि सार्वजनिक लेनदेनको क्षेत्रमा भारी प्रतिशत छूटको चर्को विज्ञापन गरिन्छ । तर, लागत मूल्यको कयौँ गुणा मूल्य जोडेर छूटको नाटक गरिन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा युरोप–अमेरिकाको प्रख्यात संस्थाका नामधारी साइनबोर्ड राखिन्छ । चर्को फि असुली गरिन्छ । क्वालिटीमा गिर्दो अवस्था भेटिन्छ । उस्तै परे परीक्षामा प्रश्न घोकाएर अभिभावकलाई बेवकुफ बनाउनेमात्र होइन, प्रश्नपत्र बिक्रीको दोकान खोलिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र, उपचारको केन्द्र बन्नुपर्नेमा अस्वस्थ उत्पादन गर्ने कारखानामात्र होइन, ‘ए’ वर्गको सुपरमार्केट बनाइएका छन् । मेसिनलाई बढीभन्दा बढी परिचालन गराउने र बिक्री गराउने केन्द्र बनाइएको छ । सहकारीका साइनबोर्डभित्र इमानदारहरु ठगिइरहेका छन् । सरकारी निकायहरु, संघसंगठनहरु धभाधम बेकम्मा, बदमास, आपराधिक र योग्यता तथा नैतिकताहीनहरुलाई शासक बनाउन तल्लीन छन् । सामूहिक वा फुटकर कुनै पनि ढंगले एउटाले अर्कोलाई ठाउँ, समय र परिस्थितिअनुरुप मौका छोप्ने र ठग्ने पेसा गर्ने उत्तरआधुनिक समाजको मुख्य नियतिबाट तैँ चुप मै चुपको रुपमा सबै पारस्परिक रुपमा आक्रान्त छन् । यी सबै उधारो कारोबारहरु पनि अनौपचारिक राजनीति नै हो ।
जालझेल, षड्यन्त्र, ढाँट, छल, बेइमानी, चोरी र डकैती वर्तमानको स्थापित चलनचल्ती भइसकेको छ । सक्दो व्यक्तिगत, सामूहिक र दलगत स्वार्थ, किफायती र ब्रह्मलुट मुलुकमा फेसन भइसकेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रसँगै राजनीतिमा यसले कब्जा जमाएको छ । अब त ‘असल’ भन्ने समाजको मानसिकतामै छैन र खराबहरु मध्येबाटै असल छान्ने जमाना आइसकेको छ । जनसरोकार र व्यवहारका प्रत्येक कारोबार ‘उधारो’ हुने वातावरणमा राजनीति बिलाएको छ । अब राजनीतिक दलका नेताहरु उधारो कारोबारका प्रखर खेलाडी र माहिर व्यापारी बनिभ्याएका छन् ।
ती राजनीतिक दलहरुले जनतासँग उधारो राजनीति गर्न अभ्यस्त भइसकेका छन् । जनता आफ्नो कसरी बनाउने वा जनताका साख्यै कसरी बन्ने भन्ने सीप, कला, तौरतरिकामा एक से एक कुशल बनिसकेका कारण पोजिसन छुट्टयाउन गाह्रो हुनेछ । उनीहरुले घोषणापत्रमा के राख्ने, बाहिर पार्टीको साइनबोर्डको रंग के बनाउने, जनतासमक्ष के बोल्ने, सिद्धान्तको धरातलमा जनतालाई सिँढी कसरी बनाउने अर्थात् के गर्ने के नगर्ने राम्ररी बुझेका छन् । जनतालाई ब्ल्याकमेलिङ गर्न र नाफा खान पल्किसकेको मात्र होइन, सत्ताका लागि त राष्ट्रियताकै व्यापारी बन्ने खतराको संकेत दिँदैछन् ।
उधारो राजनीतिको पराकाष्ठास्वरुप जे पनि गरे, गरिरहेका छन् र गर्नेछन् । एक लाखको कपडा किन्न गएको ग्राहकलाई साहूजीले कुर्सीमा बसालेर एक कप मीठो चिया खुवाएर मनोवैज्ञानिक भ्रम पारेझैँ जनतालाई यिनले गर्दैछन् । गीताको पाठ गरेजस्तो र मन्त्र जपेजस्तो शब्दपिच्छे ‘जनता’ भन्न वा आफू जनताको काम गर्ने भन्ने कुरामा कुनै दल कम देखिन्नन् । राजा, पञ्चायती शासकहरुले जनता, प्रजातन्त्र भन्नुमा र अहिलेका भनाइमा फरक छैन अर्थात् तुक छैन । राजनीति एक खालको झिलिमिलीरुपी कस्मेटिक बजार बनाउँदै लगिसके । राणा शासनजस्तो घोर तानाशाही शासनविरूद्ध लडेर प्रजातन्त्रको साइनबोर्ड देखाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले साठी वर्षसम्म सम्भ्रान्त वर्गलाई मालिक बनाएर सर्वसाधारण वर्गलाई उधारो प्रजातन्त्र बेचेर ठगिरहेछ । माक्र्सवादको साइनबोर्ड झुन्ड्याएको माले–एमाले पुँजीवादको पसलमा नवधनाढ्य वर्गलाई मालिक बनाएर बहुदलीय जनवादको उधारो व्यापार गर्दै ठग व्यापारी बनिरहेका छन् । एकतन्त्रवादी पञ्चहरु रातारात साइनबोर्ड फेर्ने आर्टिस्ट बनेर लोकल पनि होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बोर्डमुनि फुटकर जनता ठग्दै आएका छन् । हिन्दू अधिराज्य कायम गर्ने विज्ञापनमा सामन्ती राजतन्त्रको खोरमा जनतालाई जाक्ने खतरनाक योजना हुँदैछ । २०५२ सालदेखि जनयुद्धको मीठो नाम राखेर क्रान्तिको खेतीमा लागेका खाँट्टी सर्वहारावादी क्रान्तिकारी माओवादी–एमाओवादी पार्टीले किसान, मजदुर, सर्वहारा, सुकुमबासीलाई पाँचतारे होटलमा बैठक बस्दै उधारो गाँस, बास र कपास बेच्दै छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका साझेदारका रुपमा मालिक बनेर सर्वहारा वर्गलाई उधारो “नौलो जनवाद” बेचेर ठग्दै छ । कयौँपटकको पार्टी सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अभियानले पनि उधारो राजनीतिबाट मुक्त गर्न सकेन ।
यतिबेला त झन् प्रायः सम्पूर्ण दलहरु संसदीय दोकानदार भइसकेका छन् । लेनिनले भनेजस्तै संसद् खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनाउने होडबाजी सबै दलबीच चलेको छ । माक्र्सले भनेजस्तो “कार्यपालिका खालि बुर्जुवा वर्गको कार्यभार चलाउने समिति हो । संसद् खालि गफ गर्ने अखडा हो । सभासद्हरु पुँजीपतिका वकिल हुन् ।” यो भन्दा फरक देखाउन सकेका छैनन्, दलहरुले । संसद्मा बसेर संविधान र सम्झौताका बुँदाहरुको आफूअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण गर्ने चलाख वकिल बनिसकेका छन्, नेताहरु । घोषणापत्रमा संविधान दिन्छौं, जसरी पनि लोकतान्त्रिक संविधान बनाउछौं भनेर प्रतिबद्ध भई संविधानसभाको चुनाव अरबौँ खर्चेर गरे । तर, सबै उधारो भयो । झगडा गरेर, गफ गरेर बिताए दिनहरु । अलिअलि आ–आफ्ना आसेपासे, नातागोतालाई पद बाँडेर, विदेश पठाएर, जागिर खुवाएर नाफा गराए । बढी फाइदा आफैँले लिए । फेरि उही प्रतिबद्धताका साथ अर्को संविधानसभा चुनाव उत्तिकै खर्चमा गराए । यो पनि उधारो नै भयो । अझसम्म संविधान बन्न सकेन । कहिले वार्ता र सहमतिका विज्ञापन फाल्छन् तर पुनः असहमतिमै पुग्छन् ।
राजनीतिमा उधारोको पराकाष्ठा नै नाघ्दोरहेछ । खोला नै नभएको ठाउँमा पुल बनाइदिने घोषणा हुन्छ । खेत नै नभएको ठाउँमा सिंचाइ गरिदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । यसो गर्दै पञ्चायतदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, आदिको “लोकतन्त्र”मा नामसारी भएको छ । तर, मञ्त्र फेरि पनि पुरानै छ । रक्सी पुरानै, बोतल मात्र नयाँ । फाट्टफुट्ट चोक, सडक, पार्क आदिको नाम परिवर्तन गरेर लोकतान्त्रिक न्वारान गरिएको छ । तर, काम हुन सकेको छैन, उधारै रहेको छ ।
२००६ सालदेखिको “संविधान” नै उधारो सावित हुने छाँटकाँट देखिन्छ । नेपाली जनताले क्रान्ति गरे, आन्दोलन गरे, जनयुद्ध गरे, वलिदान, त्याग गरे । कयौँ शहीद भए, कयौँ अंगभंग र अपांग भए । कयौँ त घरबारविहीन भए । पटकौंपटक भोट दिए दललाई । राजनीतिक दलहरुले जे–जे भन्छन्, त्यही–त्यही माने र गरे । के उधारो राजनीतिका लागि हो ? निश्चित होइन । ती सबै त्याग, तपस्या, बलिदान, योगदान र भोट नगदे राजनीतिका लागि हुन्, नगदे राजनीतिक उपलब्धीका लागि हुन्, नगदे लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्तिका खातिर हुन् ! अग्रगामी परिवर्तनसहितको सुशासन, विकास र लोकतान्त्तिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि हुन् । दीर्घकालीन शान्ति र सुव्यवस्थाका लागि हुन् । समावेशिता, सहअस्तित्व र समान पहुँचसहित द्वन्द्वको स्थायी अन्त्यको खातिर हुन् । जो नगद हुनुपर्ने हो, तर आजसम्म उधारै रह्यो । सबै राजनीतिक दलहरु उधारो राजनीतिका साहूजी नै हुन् । यो जनतालाई अजीव बनाउने उधारो राजनीति कहिलेसम्मका लागि हो ?